Siyaasiyiin caan ah oo ka biyo diiday in loo magacaabao Ra’isul Wasaare iyo Sababta keentay ! – Mudug24
HomegalmudugSiyaasiyiin caan ah oo ka biyo diiday in loo magacaabao Ra’isul Wasaare iyo Sababta keentay !
July 29, 2020 admin galmudug, wararka Dalka, Wararka maanta 0
Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in Madaxtooyada Soomaaliya xiriiro kala duwan la sameesay siyaasiyiin tun weyn oo kasoo jeeda beesha Hawiye ,kuwaa oo lagala tashanayay magacaabista Ra’isul Wasaaraha cusub.
Siyaasiyiintan ayaa qaarkood loo soo bandhigay in loo magacaabo xilka Ra’isul Wasaaraha dhoorka bilood ee ka harsan mudo xileedka dowlada hada jirta, waxaana ka cudur daartay in aqbalaan magacaabistan qaar kamid ah siyaasiyiinta loo bandhigay.
Sida aan wararka ku helnay siyaasiyiinta loo soo bandhigay xilka Ra’isul Wasaaraha waxaa ku jira kuwa hogaamiya xisbiyo siyaasadeed kuwaa oo damac ugu jira in dalka Madaxweyne ka noqdaan una tartamaan doorashada soo socota.
Dalaaliin siyaasadeed oo soo dirtay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale waji gabax kala kulmay siyaasiyiin loo diray in ay kasoo dhaa dhiciyaan aqbalaada xilka Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga yaabaa in xilka Ra’isul Wasaaraha u magacaabo xubno aan la fileyn oo isaga la shaqeeya hadii uu ku guul dareesto in siyaasi saameyn leh ayna wada shaqeyn karaan helo si xilkan ugu magacaabo.
Siyaasiyiinta ka biyo diiday qabashada xilka Ra’isul dhoorka bilood ee dowlada u harsan ayaa sheegay in aysan xiligan kala guurka ah diyaar u aheyn qabashada xil dowladeed oo ka mashquulinaya damacooda siyaasadeed ee ku aadan in hogaanka dalka u tartamaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaana si deg deg ah looga sugayaa in uu soo magacaabo ra’isul Wasaare soo dhisa xukuumad cusub si shaqada dowlada halkeeda uga sii socoto, waxaana damaca Madaxweynaha la sheegay in ay tahay in mudo 2-sano ah loogu daro.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaana wada wadatashiyo ku aadan shaqsiga loo magacaabo Ra’isul Wasaare, Madaxweyne Farmaajo ayaana wada wadatashiyo balaaran oo ku aadan magacabaista Ra’isul Wasaare cusub iyo shaqsiga ugu haboon xiligan kala guurka ah.
Maxaa ka jira in Madaxweyne Qoor Qoor loo magacaabayo Raisul Wasaare
Madaxweyne Farmaajo oo kulan deg deg ah iskugu yeeray taliyeyaasha ciidamada qalabka sida